नेपालका कोरोना संक्रमितमा किन लक्षण देखिएन ? – Sanchar Patrika
August 2, 2020 186
अनुसन्धानमा कोरोना भाइरसको प्रकार, बनावट र संरचना हेरिने छ ।
युरोपबाट आएका संक्रमितमा कडा भाइरस र भारतबाट आएकामा सामान्य देखिएको छ । ‘यस्तो के कारणले भयो वा योभन्दा बाहिर अरू केही कारण छ कि भनेर खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,’ डा. धिमालले भने ।
Prevस्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको ‘नयाँ मापदण्ड’ थाहा पाउनुभयो ?रोक्ला त राजु सदाको जस्तो नियती ?
Nextछोराले आमालाई सम्झिदा अर्जुन बिक रोए ! छोराको जीवन फेरिदा श्रीमति सम्झिएर बोल्न सकेनन्(भिडियो)
विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट छुट्टियो अमेरिका